Daawo Video:-Waxgaradka Muqdisho Oo Si Toos ah Xassan Sheekh Uga Dalbaday inuu Ka Nasto Siyaasadda, Si dalka Loo Badbaadiyo | puntlandi.com
Daawo Video:-Waxgaradka Muqdisho Oo Si Toos ah Xassan Sheekh Uga Dalbaday inuu Ka Nasto Siyaasadda, Si dalka Loo Badbaadiyo
Suldaan Maxamed Wali oo ka mid ah Waxgaradka Muqdisho ayaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ka codsaday inuu ka tanaasulo tartanka uu ugu jiro hogaanka dalka, ka dib markii uu Afar sano uu dib u socod ah dhaxal siiyay Ummadda Soomaaliyeed.
Wuxuu codsigan u jeediyayay, xilli uu Live u fadhiyay mid ka mid ah Telefishanada Soomaalida, waxaana hal mar Hoolka isqabsaday sacab iyo sawaxan, taasi oo muujinaysa sida ay dadku u dhibtoodeen, una doonayaan isbadal dhab ah.
Inkasta oo la doonay in la caburiyo inta uu hadlayay, hadana shacabkii madasha fadhiyay ayaa dareenkooda qaylo ku muujiyay, waxaana Xassan uu la kulmay fadeexad wayn, waxayna u ahayd tusaale cad oo muujinaya in dadku isbadal u baahan yahay.
”Shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inaadan Barnaamijkan ka bixi karin, Suuragal ma tahay aan kuu ducaynee innaad iska casisho Musharaxnimada oo aan Madaxweyne kale raadsano” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay.
Wuxuu intaas ku daray in dalku u baahan yahay Madaxweyne badbaadiya, sidaa darteed buu yiri mudane Gabar baan ku siinaynaa iyo Guri ee iska naso.
”Ummadda Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inaadan Afartaa sano badbaadin karin, waxaan codsanayaa inaad iscasisho oo aad naga dayso Musharaxnimada” Ayuu kuso Afmeeray hadalkiisa Maxamed Weli.